Fikarohana momba ny firaisana Ny raharaha Reincarnation an'i Ray Charles | Matthew Whitaker: Genius musical jamba amin'ny gadona roa - fikarohana Reincarnation
Reincarnation manazava ny famokarana ankizy
Nianarako Matthew Whitaker, famokarana mozika, amin'ny alàlan'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra nasionaly. Isaky ny mianatra momba ny zaza tsy ampy taona aho dia manontany tena hoe iza izany olona izany tao anatin'ny fiainana niainany talohan'izay, tahaka ny kaontin'ny reincarnation ho an'ny famokarana zaza.
Ny fikarohana reincarnation dia manambara fa mitovy amin'ny olona iray ihany isika amin'ny fiainana iray hafa, ny fiovan'ny toe-javatra ihany. Manantena izahay fa hivoatra, hivoatra ary ho lasa mangoraka kokoa mandritra ny fahatongavan-tsika, izay tanjon'ny reincarnation.
Novakiako fa mikasa ny handinika ny fiasan'ny atidohan'i Matthew ny mpahay siansa, mba hahitany raha azon'izy ireo ny toerana niaviany. Tsy hahita ny loharano ao amin'ny atidoha izy ireo, na dia ny faritra sasany ao amin'ny atidoha aza dia hita ho ivon'ny hetsika ara-mozika, satria ny loharanon-javatran'i Matio dia ao anaty fanahiny ary ny fahatongavany ho lasa Ray Charles, izay azo inoana fa namolavola ny talentany tamin'ny maharitra ela.
Ny Fiainana sy ny fahafatesan'i Ray Charles
Ray Charles Robinson, fantatra amin'ny Ray Charles, dia teraka tamin'ny 1930 tany Florida tamin-drainy Bailey Robinson, mpiasa, ary ny reniny Aretha, izay namory vola. Taty aoriana dia teraka ny zandriny iray atao hoe George. Mampalahelo fa tafintohina i George tao amin'ny fandroana an-drenin'ity zaza 4 taona ity.
Tamin'ny faha-3 taonany dia nihamalemana ny fitiavana mozika tian'i Ray raha nandre azy Boogie Woogie nilalao an'i Wylie Pitman amin'ny piano mitsangana any amin'ny Red Wing Café. Pitman izany dia nampianatra an'i Ray ny fomba hilalao piano.
Nanomboka tsy hita maso i Ray tamin'ny faha-5 taonany ary jamba tanteraka tamin'ny faha-6 taonany, toa avy amin'ny glaucoma. Faty hafa koa i Wiley rainy, izay nandao ny ankohonany. Iray amin'ireo loza lehibe indrindra niainan'i Ray ny fahafatesan'i Aretha reniny, izay notokisany mafy tamin'izy 14 taona.
Dia lasa Ray ho lasa mpanakanto kanto mozika lehibe indrindra nandritra ny fotoana rehetra i Ray ary nantsoina hoe "The Genius" nataon'ireo namany. Maty izy tamin'ny faha 73 taonany tamin'ny 2004.
Matthew Whitaker: Ny Reincarnation an'ny Ray Charles-A Fahatongavana ho Fahatongavana ho nofo
Matthew Whitaker dia teraka tamin'ny 2001, 3 taona talohan'ny nahafatesan'i Ray Charles. Raha izany dia maneho tranga iray ny Ny fihenam-bidy, izay misy ny overlay mandritra ny androm-piainana. Ity trangan-javatra ity dia azo sary an-tsaina raha ny fanahy manome ny angovo ho vatana roa, toy ny loharanom-pahazavana azo zaraina ho taratra maro amin'ny alàlan'ny basina fitaratra.
Na dia misy olona mivelona vatan'olombelona roa amin'ny fotoana iray aza dia foto-kevitra sarotra ekena, Ian Stevenson, MD an'ny Oniversiten'i Virginia koa voarakitra ny tranga momba ny fananganana nofo miavaka. Stevenson dia nanondro ireo "tranga misy amin'ny daty mihetsiketsika", ilazana ny fahatongavan'ireo androm-piainany. Ny iray amin'ireo tranga mafy indrindra an'i Stevenson dia misy ny fahatapahan-jaza misaraka. Raha te hahalala bebe kokoa, azafady, mandehana:
Ny raharaha Reincarnation, Famonoan-tena ary fisarahana amin'ny Helmut Kohler | Ruprecht Schultz
Talenta fiainana taloha: Nodinihan'i Matthew ny mozikan'ny mozikan'i Ray Charles
Matthew Whitaker dia teraka 3 volana mialoha ny lanjan'ny lanjan'ny sivy kilao, ary nomena fivelomana 2 isan-jato. Izy dia jamba raha teraka noho ny retinopatima loatra teo alohan'ny fanambadiana.
Rehefa 3 taona izy dia nilalao ny hira i Matthew Kintana kely, kintana kely tamin'ny piano kilalao, na dia tsy nisy olona nampianatra azy ny fomba fanao piano. Nandre ilay hira i Little Little ary avy eo dia namerina izany tamin'ny feon-kira an-tsofiny tamin'ny sofina, izay tena mahafinaritra tokoa. Afaka nieritreritra ny olona fa ny fanahin'ny Ray Charles dia nanambara fa niverina izy.
Nanomboka teo dia lasa mpahay mozika olo-malaza i Matthew, nanao fampisehoana tao amin'ny Kennedy Center any Washington, DC ary Carnegie Hall any New York City, ary koa ny fitsangatsanganana an'i Eoropa, Afovoany Atsinanana sy Azia.
Tamin'ny taona 2017, tamin'ny faha-16 taonany izy no nanatanteraka izany tao amin'ny Asehoy i Ellen Degeneres, ary nifaninana tamin'ny fifaninanana televiziona izy, Fotoanan'ny fampisehoana ao amin'ny Apollo, ka izy no voalohany.
Reincarnation: maninona no jamba amin'ny fiainana roa?
Ny fiainam-piainam-piainan'i Matio taloha dia i Ray Charles izay nateraky ny Ahtun Re, mpitari-dàlana na fanahy iray nampitaina tamin'ny alàlan'ny trance Kevin Kevinerson. Kevin dia mpanelanelana amin'ny saina na saina i Shirley MacLaine izay mpilalao sarimihetsika sy mpanoratra dia nasongadiny tamin'ny efatra tamin'ireo bokiny.
Niara-niasa tamin'i Kevin sy Ahtun Re aho hatramin'ny 2001 ary hitako fa i Ahtun Re dia afaka manao lalao taloha miaraka amin'ny fahamendrehana avo lenta. Ny fifampiresahako amin'i Ahtun Re momba ny zava-miafina amin'ny fiainana dia hita ao amin'ny bokiko:
Ny Torolàlana ho an'ny Fanahy Ahtun Re dia manazava ny niandohan'ny fahajambana teo amin'ny fiainan'i Ray Charles sy i Matthew Whitaker
Ahtun Re farany dia tonga nofo tany Ejipta tokony ho 3500 taona lasa izay. Hatramin'izay dia nandinika ny olombelona nipoitra avy amin'ny tontolon'ny fanahy izy.
Mikasika ny Ray Charles | Matthew Whitaker tranga fanalefahana indray, nanontany an'i Ahtun Re aho fa maninona ny olona iray no ho jamba mandritra ny roa misesy? Izaho dia tena mibanjina tokoa, araka ny azonao fantarina amin'ity tranokala ity, toy ny zavatra mahatsiravina loatra ny jamba.
Ahtun Re nanazava fa misy fanahy sasany, toa ny fanahin'i Ray | Matthew, aleony miaina ao anatin'ny tontolo misy feo ary hanao injeniera mandritra ny fotoana maha jamba azy. Mandritra ireo androm-piainana ireo dia mampivelatra ny fahaizana mozika izy ireo.
Aza hadino fa ny fanahy, izay maharitra mandrakizay, dia tonga nofo eto an-tany mitranga ao anatin'ny indray mipi-maso.
Ny famolavolana fiainana an-jambany dia midika fa ny fanahy dia afaka manodinkodina ny rafitra biolojika, izay lazain'i Ahtun Re fa marina. Raha ny marina dia hitantsika ny fanahy mitaona ny biolojia satria ny tarehy dia mety hitovy amin'ny androm-piainany iray hafa.
Fitsaboana Reincarnation Involving in Musicians
Raharaha fiainana taloha izay misy mpamorona, mpitendry mozika ary mpihira
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Misy fitovian-javatra eo amin'ny endrik-tsehatra an'i Ray Charles sy Matthew Whitaker.
Ny filan'ny fiainana taloha, ny talenta ary fahaiza-manao: Manohy ny dian'ny mozika Ray Charles i Matio.
Amin'ny resaka mifanoratra mahaliana, mariho ny fomba fitenin'ny pejin'ny tranon'i Ray Charles sy Matthew Whitaker: